वामदेवलाई झट्का लाग्ने गरी आयो प्रचण्डको अभिव्यक्ति, अब के हुन्छ काठमाडौं ७ मा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
वामदेवलाई झट्का लाग्ने गरी आयो प्रचण्डको अभिव्यक्ति, अब के हुन्छ काठमाडौं ७ मा ?
प्रकाशित मिति: २५ आश्विन २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा नेता वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय नभएको बताएका छन् ।
उनले नेता गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत संसद ल्याउने सन्दर्भमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने चर्चाको बारेमा पार्टी कुनै निर्णय नभएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले सिट गुमाउने गरी निर्वाचनमा नजाने बताउदै उनले जित्ने गरी मात्र उम्मेदवार बनाउने बताए ।
वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न कुनै व्यवधान नरहेको बताउदै उनले विकास, सुशासन र स्थिरताका लागि अझ प्रभावकारी रुपमा कसरी काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
पाथीभारा सद्भावनादूत परिचयपत्र वितरण तथा चाडपर्वका अवसरमा बुधवार आयोजित चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले यसबीचमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधारका साथै विभिन्न सकारात्मक काम गरेको तर सोचे जति तीव्ररुपमा काम गर्न नसकेको भनी उठेको प्रश्नमाथि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
आफू र प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सरकार सञ्चालन र पार्टीका विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको बताउदै प्रचण्डले जनभावना अनुसार कडारुपमा दण्डसजाय प्रणाली स्थापित गर्न र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन देखिएका कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए ।
काठमाडाैं । मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेकी अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा अन्ततः […]
संघीयता नयाँ खेल हो, गलत बाटोमा गएका छैनौँ,हामी च्याम्पियन हुनेछौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि […]
काठमाडौं । नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले कांग्रेसको संशोधित विधान तत्काल लागू गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । […]
नुवाकोटका युवा नेतावाट सुरु भयो’सबैको कांग्रेस,सधैको कांग्रेस अभियान’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र बढेको गुटबन्धी र आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसकमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै […]
प्रदेश सरकार गठनको १० महिनापछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बस्दैछ। प्रदेश सरकार गठनको १० महिनापछि आइतबार प्रदेश […]
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ६ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । पूर्व वनमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान […]
दुई महिनामै नौ सय कर्मचारीको विदेश भ्रमण